Sacuudiga oo dalbaday in la toogto shan kamid ah rag loo haysto dilkii Khashoggi | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Sacuudiga oo dalbaday in la toogto shan kamid ah rag loo haysto...
Sida ay ku warramayso warbaahinta Sacuudigu maxkamadaynta 11 qof oo loo haysto dilkii Wariyihii Sacuudiga ahaa ee Jamal Khashoggi, ayaa ka bilaabatay magaalada Riyadh, ee Caasimadda Sacuudiga.
Maxaan ka ognahay Maxkamadaynta?
Warbaahinta xukuumaddu ma aanay baahin wax aan ka ahayn macluumaad kooban oo ah in fadhigii maxkamadda dambiyada ee ugu horreeyey ee kiiskan ku saabsan uu bilowday, ayna joogaan qareenada u doodaya eedaysaneyaasha.
Wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa sheegtay in codsiga ah in Turkigu uu keeno caddeemo la xiriira dadka uu doonayo in loo gacan gacaliyo aanan wali laga jawaabin.
War goor hore soo baxay ayaa lagu sheegay in 10 qof oo kale la baaray.
Majiraan wax magacyo ah oo la xiriira eedaysaneyaasha oo si rasmi ah loo baahiyey.
Bishii November, ayaa ku xigeenka dacwad oogaha guud Shalaan bin Rajih Shalaan waxa uu sheegay in baareyaashu ay ogaadeen in sarkaal Sirdoonka katirsan ah uu bxiyey amarka dilka Khashoggi, asagoo lagu muday irbad sun ah laguna dilay gudaha qunsuliyadda.
Wuxuuna intaas ku daray in sarkaal kaas loo xilsaaray in Wariyahaas mucaaradka ah uu kusoo celiyo Boqortooyada.
Sida uu sheegay Mr Shalaan, maydkii Khashoggi ayaa lagu jarjaray dhismaha gudihiisa, xubnihii jirkiisana waxaa loo dhiibay nin kamid ah dadka deegaanka oo hawsha wax ka ogaa kaas oo meelo kale kusoo aasay.
Wali lama hayo wax kamid ah haraagii maydkiisii.
Cid ma laga garanayaa eedaysaneyaasha?
Turkiga ayaa aqoonsday 15 nin oo la rumaysan yahay in ay ahaayeen rag uu sacuudigu soo dirsaday ayagoo imaanaya kana baxaya Garoonka diyaaraha ee Istanbul xilli u dhow markii dilku dhacay.
Hase ahaatee ma cadda in qof raggaas kamid ah uu kujiro kuwa lagu maxkamadaynayo Riyadh.
Halka nin ee aan maxkamadaynta kujirin waa Dhaxal Suge Maxamed Bin Salmaan, wiilka boqor Salmaan, ahna ninka sida dhabta ah xukuma Sacuudiga, kaas oo ay reer Galbeedku ku eedeeyeen in uu dilka ka dambeeyey.
Sida uu sheegay masuul Maraykan ah hawgalka noocaas oo kale ahna waxaa lagama maarmaan ah in Amiirku uu oggolaado.
Amiir Mohammed ayaa beeniyey in wax kaalin ah uu ku lahaa waxa uu ugu yeeray “Dil bahalnimo ah oo aan loo garaabi Karin”
Maraykanka ayaa cunaqabatayn saaray 17 kamid ah saraakiisha Sacuudiga, oo uu kamid yahay Saud al-Qahtani, oo la taliye hore u ahaa Dhaxal Sugaha kaas oo la sheegay “in uu qayb ka ahaa qorshaynta iyo fulinta hawgalka” hawlgalkaas oo horseeday dilkii Khashoggi.
Previous articleDawlada Somaliland oo albabada u xidhay Beerta libaxyada ee hargaysa ee uu leeyahay Siyaasi warancade
Next articleNicholas Haysom muxuu u sheegay Golaha Ammaanka ee QM? fadhigii maanta